वसन्त जौ - महत्त्वपूर्ण भोजन, चारा र प्राविधिक बाली। यस लेखमा यो संस्कृति को मुख्य विशेषताहरु छलफल र विशेष गरी यसको खेती को हुनेछ।
निर्मित वसन्त जौ अन्न अनाज (र मोती जौ) र पीठो देखि। शुद्ध जौ पीठो 20-25% को राशि, यो प्रयोग गरिन्छ, गहुँ वा राई गर्न admixed छ पीठो। जौ पनि सुँगुरहरु लागि प्रयोग गरिन्छ, र क्षेत्रमा जहाँ यो जई विकास छैन - घोडाहरू खुवाउने लागि। साथै, यो संस्कृति रक्सी र बियर को उत्पादन को लागि कच्चा माल छ। जौको बीउ समावेश छन्: नाइट्रोजन-मुक्त extractives - 64,6%, प्रोटिन - 12%, सेलूलोज - 5.5%, पानी - 13% बोसो - 2.1% र 2.8% खरानी।
संस्कृति को मूल
जौ - सबैभन्दा पुरानो कृषि बाली एक। को उत्खनन रूपमा उहाँले गहुँ संग, ढुङ्गा आयु मानिसहरूलाई ज्ञात थियो। मिश्रीहरूले 50 शताब्दीयौंदेखि ई.पू. लागि जौ विकास। ग्रीस, इटाली र चीन मा यो प्रागैतिहासिक पटक देखि उत्पादन गरिन्छ। अन्तर्गत हुर्केका मध्य एशिया जौ को क्षेत्र मा उत्खनन को सामाग्री अनुसार सिंचाई सुविधा उपलब्ध कृषि 4-5 हजार वर्ष ई.पू. लागि। माल्डोवा र युक्रेन इलाका मा 3rd सहस्राब्दी ईसा पूर्व मा खेती गर्न थाले। मिति, वसन्त जौ को खेती दुनिया भर अभ्यास छ।
जीनस Hordeum एल जंगली जौ को सांस्कृतिक र धेरै प्रजातिका तीन प्रकारका बनेको छ। सांस्कृतिक जौ फल-बोकेका कान, फलामको डण्डाले को खण्डहरूमा मा अवस्थित छ जो को संख्या द्वारा वर्गीकृत छ। यी प्रकार विचार गर्नुहोस्:
Hordeum vulgare। यो दृश्य बहु-पङ्क्ति वा साधारण भनिन्छ। यसलाई स्थित छ फलामको डण्डाले प्रत्येक खण्ड तीन फल-असर अन्न दिने spikelet। कान घनत्व साधारण जौ को डिग्री आधारमा दुई उप विभाजित छ: सही 6-पङ्क्ति (बाक्लो र बाक्लो, अपेक्षाकृत छोटो, क्रस-खण्डमा कान नियमित हेक्सागन जस्तो), र गलत 6th पङ्क्ति (कान कम बाक्लो, को अनाज संग पङ्क्तिहरू गलत तरिकाले व्यवस्थित गर्दै छ, छेउमा spikes एकअर्काप्रति प्रविष्ट गर्नुहोस् र विकास मध्यम साथ राख्न सक्नुहुन्छ, यो) क्रस-खण्ड स्पाइक एक आयताकार आकृति खेल्छ।
Hordeum distichon। फलामको डण्डाले तीन खण्ड spikelet (- स्टेराइल फल-असर मध्यम र छेउ) बस्छन जो यो दुई-पङ्क्ति जौ। पार्श्व spikelets को प्रकृति द्वारा दुई-पङ्क्ति जौ दुई उप विभाजन गरिएको छ। पहिलो पक्ष उप स्टेराइल spikelets प्रबन्ध फूल र glumes र दोस्रो - बस glumes।
Hordeum intermedium। यो मध्यवर्ती जौ। एक भ्क्याल Koloskov रड मा उहाँले 1-3 अनाज विकास गर्न सक्नुहुन्छ।
हाम्रो अक्षांश मा, प्रसार मात्र बहु-पंक्ति र दुई-पङ्क्ति जौ थियो। मूल सामान्यतया थप precocious र खडेरी प्रतिरोधी। बहु-पंक्ति र दुई-पङ्क्ति जौ धेरै प्रजाति विभाजन गरिएको छ। यो वर्गीकरण जस्तै spinous वर्ण awns, रंग स्पाइक र अनाज, Hulled अन्न घनत्व र स्पाइक रूपमा विशेषताहरु आधारित हुन सक्छ।
वसन्त जौ फरक माटो र जमिनको अवस्था राम्रो adapts।
तापमान। जौ बीउ 1 डिग्री को एक तापमान मा अङ्कुराउन सुरु गर्नुहोस्। यस मामला मा, अंकुरण तापमान को सबै भन्दा राम्रो सूचक 20-22 डिग्री छ। यो संस्कृति को मार तल शून्य 8 डिग्री तल चिसो सामना गर्न सक्छन्। फूल र पकने समयमा विशेष बोट तुसारो संवेदनशील बन्नेछ। weevil भ्रूण लोड समयमा प्रभावित हुन सक्छ पनि द्वारा 1.5-3 डिग्री सेल्सियस। अन्न, पूर्ण अंकुरण गुमाउन सक्छ परे चिसो गर्न subjected। चिसो प्रतिरोध जौ को किसिमहरु आधारमा फरक हुन्छ। सबैभन्दा प्रतिरोधी ग्रेड ध्रुवीय क्षेत्रहरु अधिकार।
जौ को अन्न भर्ने समयमा उच्च तापमान राम्रो जई र गहुँ भन्दा सहन छ। अध्ययन अनुसार VR Zelenskogo, 38-40 डिग्री stomata एक तापमान यो संस्कृति 25-30 घण्टा पछि बन्द गर्न आफ्नो क्षमता गुमाउन। वसन्त गहुँ यो सूचकांक 17 10 को बीच र घण्टा छ। कारण विकास को प्रारम्भिक चरणमा गहन रुचाउने लागि यसको प्रारम्भिक परिपक्वता र क्षमता उच्च तापमान गर्न जौ प्रतिरोध वृद्धि।
चिस्यान। खडेरी मा वसन्त जौ को प्रतिरोध गर्ने 1st समूह को रोटी बीच नेताहरूको छ। यसको transpiration दर जौ बाली अक्सर गहुँ बाली भन्दा बढी मोटा छन् बारेमा 400. सुखा क्षेत्रमा छ।
हावा र माटो खडेरी प्रतिरोध गर्ने किसिम फरक हुन सक्छ। यो बेफाइदा चिस्यान जौ मा-चरण उत्पादन ट्यूब गर्न सबैभन्दा susceptible। यो समयमा माटो पानी को एक अपर्याप्त रकम समावेश छ भने, कान राम्ररी विकास र बाँझो spikelets यो वृद्धि हुनेछ संख्या सक्दैन।
माटो। पहिले नै उल्लेख रूपमा, वसन्त जौ सफलतापूर्वक फरक माटो र जमिनको क्षेत्र मा, soils विभिन्न प्रकार आफ्नो adaptability द्वारा सचित्र रूपमा विकास। माटो को प्रजनन गर्न उत्तरदायित्व को मामला मा, जौ थप जई भन्दा गहुँ जस्तै छ। उहाँलाई लागि, सबै भन्दा स्वीकार्य संरचनात्मक उर्वर माटो गहिरो पाराले जोतेर संग बादल मडारिरहेको। बलौटे र बलौटे loam soils मा, अनाज गरिबी विकास गरिएको छ। यो पनि जौ अम्लीय पीट र नुनखरा soils लागि प्रतिकूल छ। यो 7.5 गर्न 6.8 को एक पीएच संग soils मा राम्रो बढ्छ।
वनस्पति। विविधता, क्षेत्र बढ्दै र गर्मी जौ को climatic अवस्था आधारमा बढ्दै अवधि 60 110 दिन देखि दायरामा गर्न सक्नुहुन्छ।
मिति, वसन्त जौ प्रजातिहरू धेरै छन्। हामी अर्डर मुद्दाको बारेमा एक सामान्य विचार प्राप्त गर्न, केही लोकप्रिय हेर्न छौँ।
विस्काउंट। विविधता intraspecific संकरण को विधि द्वारा सिर्जना गरिएको थियो। यो सोझो खोक्रो स्टेम झाडी औसत मोटाई छ। अन्न वजन 0,042-0,054 ग्राम छ। यो वनस्पति अवधि क्षेत्र आधारमा 73 127 दिन देखि दायरा। विविधता forage मानिन्छ, तर अनुकूल अवस्थामा अन्न, मदिरा लागि उपयुक्त उत्पादन गर्न सक्छन्। औसत अन्न 11 देखि 13% प्रोटिन गर्न पाइन्छ। Membranous 10% भन्दा बढी छैन। को निकाल्ने 77,8-80,1% छ।
विविधता रोग र परिवर्तन माटो र जमिनको अवस्था गर्न प्रतिरोधी छ। यसको संभावित उपज प्रति हेक्टर 70 quintals छ। यो क्रमबद्ध उत्तर क्षेत्रमा पहिलो सम्भव निस्कनुहोस् मा बाहिर छ। 1 हा लगभग 4.5-5 लाख बीउ छरिएको छ। रोपण ढिलो भएको छ भने, र वसन्त सुक्खा हुन अपेक्षा गरिएको छ, यो 1 लाख वृद्धि गर्न संकेत छ।
Vakula। विविधता बढ्दै अवस्थामा परिवर्तन गर्न उच्च adaptability छ। यो एक राम्रो फसल सुनिश्चित जो वसन्त को आगमन र दिइएको अक्षांश को विशेष को लम्बाइ बिना photoperiodic संवेदनशीलता, कम छ। अन्न वजन दायरामा सक्छ 0,046 देखि प्रशस्त चिस्यान वजन संग 0,052 G गर्न 0.060 G उच्च ऊर्जा अन्न वृद्धि, membranous कम र कम प्रोटिन सामग्री विभिन्न छ पुग्छ। उत्तरार्द्ध सुविधा तपाईं भठ्ठी यसलाई लिन अनुमति दिन्छ। रोपेको दर23 लाख गर्न बीउ देखि 1 हेक्टर प्रति दायरामा गर्न सक्नुहुन्छ। सुखा अवस्थामा Thickened बाली ठूलो, उच्च गुणस्तरको बीउ दिन छैन। Vakula yielding प्रजातिहरू प्रति हेक्टर 50 90 quintals देखि दायरामा गर्न सक्नुहुन्छ।
HELIOS। जौ यस किसिम Vakula को प्रकारको यसको विशेषताहरु त्यस्तै छ। तथापि, उहाँलाई तुलनामा उहाँले एक उच्च अन्न गुणस्तर छ। राम्रो ब्रश र राम्रो चिस्यान अन्तर्गत एक उच्च उपज दिन्छ। विविधता कम गति दर संग गहन खेती लागि हो। अन्न वजन दायरामा सक्छ 0,048 देखि 0050 ग्राम गर्न। बढ्दो मौसममा धेरै संकीर्ण दायरामा भिन्न - 90-93 दिन। को गति दर प्रति 1 हेक्टर 3,7-4,16 लाख बीउ छ। यस्तो जौ को पैदावार 89 टी पुग्न सक्छ / हा।
डंकन। कक्षा को वसन्त जौ क्यानाडा मा शुरू र उत्कृष्ट प्रदर्शन उपज, अंकुरण र ताकत संसारमा धन्यवाद वरिपरि फैलिएको थियो। किनभने PERMUT र आवासगृह गर्न प्रतिरोधी जौ प्रजातिहरू को बलियो स्टेम को। मा औसत 0,049 G उपज ग्रेड प्रति हेक्टर 80 quintals छ एक अन्न को वजन छ। र यो उहाँले एक धेरै कम बीज दर छ भन्ने तथ्यलाई बावजुद - प्रति हेक्टर 2-2.2 लाख बीउ। उत्तरार्द्ध आंकडा को thickened राज्य संस्कृति गरिबी विकास भन्ने तथ्यलाई कारण छ।
Priazovsky 9। रूसी संघ विविधता सूचीबद्ध जमानत को जौ प्रजातिहरू छरिरहेका। यो खडेरी र राम्रो ductility उच्च प्रतिरोध द्वारा विशेषता छ। जौको को वनस्पति अवधि 80-82 दिन छ। डाँठमा यो आवासगृह उच्च बल र प्रतिरोध छ। विविधता powdery फफूंदी, जंग को प्रभाव गर्न प्रतिरोधी छ र किरा सबै प्रकारका बौना। सबै को सबै भन्दा राम्रो यो केन्द्रीय काला धरती, उत्तर काकेशस र रूस को मध्य वोल्गा क्षेत्रहरु मा खेती को लागि उपयुक्त छ। जौ यस प्रकारको पैदावार प्रति हेक्टर 42-63 quintals छ। एक अन्न को वजन 0,045-0,055 ग्राम दायरामा हुन सक्छ।
Mamluk। यो विविधता एक उच्च photoperiodic संवेदनशीलता छ, त्यसैले यसलाई वृद्धि को प्रारम्भिक चरणमा तीव्र गतिमा विकास भएको छ। यो विविधता मा आवासगृह प्रतिरोध तर, यो रूसी प्रजातिहरू सूचीमा समावेश गरिएको छ, जस्तै अघिल्लो एक को कि रूपमा उच्च छैन। अन्नको सबैभन्दा तर अनाज को व्यापक र प्रशोधन खुवाउन जान्छ। ग्रेड वस्तुतः कुनै infestation मशीनरी रोगहरु गर्न खडेरी र विषय एउटा औसत प्रतिरोध छ। सबै भन्दा लोकप्रिय क्रास्नोडार र रूसी संघ को Stavropol Krai मा Mameluke प्रयोग गर्दछ। Yielding प्रजातिहरू प्रति हेक्टर 68 टन सम्म पुग्न सक्दैन। वसन्त जौ उपज र उच्च को उत्पादकत्व, को ढिलो यसलाई seeded गरिनेछ। को गति दर प्रति हेक्टर 4.55लाख गर्न बीउ देखि दायरा। यदि वसन्त जौ को रोपेको सर्तहरू सम्हाल्नुभएको छैन, यो एक लाख वृद्धि गर्नुपर्छ।
परिक्रमण मा स्थान
वसन्त जौ लागि सबै भन्दा राम्रो precursor यस्तो आलु, मकै र चीनी चुकंदर रूपमा पङ्क्ति बाली हो। एउटा राम्रो विकल्प पनि कार्य , जाडो बाली शुद्ध मल जोडी मा चलिरहेको। यदि यो सफा जोडी वा बारहमासी घास मा राखिएको थियो जौ र वसन्त गहुँ, पछि छरिएको। जौ, विशेष गरी मदिरा लागि उपयुक्त, पङ्क्ति बाली ठाउँमा छरिएको। यो एक उच्च उपज र उच्च गुणस्तरीय अन्न, स्टार्च को जो धेरै दिन्छ।
कार्यहरू वा खाना पशुधन फिड जौ र seeded legume लागि जो नाइट्रोजन पछि माटो मा जम्मा। को चुकंदर क्षेत्रमा यो अक्सर चुकंदर ठाउँमा छरिएको छ। अध्ययन अनुसार, जौ को उच्चतम उपज जब यो द्वारा preceded छ अवलोकन छ (अर्डर घट्दो मा): आलु, मकै, सन, चुकन्दर, वसन्त गहुँ, जौ।
जौ एक precocious संस्कृति भएकोले, यो वसन्त लागि राम्रो precursor छलफल, र केही क्षेत्रहरु र जाडो बाली मा छ। कारण प्रारम्भिक बाली गर्न, यो पनि कभर क्रप रूपमा मानिन्छ र यो आदर, अन्य वसन्त अनाज मा उच्च छ।
वसन्त जौ माटो मल को परिचय राम्रो प्रतिक्रिया। नाइट्रोजन, पोटासियम को 2.5-3 किलो र 2-2.4 किलो 1.1-1.2 किलो फस्फोरस गर्न आवश्यक 100 किलो अन्न को गठन। विकास संस्कृति को प्रारम्भिक चरणहरु मा मल को एक सानो राशि खपत। को "मार-tillering" समयमा यो लगभग फस्फोरस, नाइट्रोजन आधा र पोटासियम बढ्दो मौसममा प्रयोग मल को कुल वजन तीन चौथाई को आधा खपत।
जहाँ यो मुख्य अन्न बाली हो यो उत्तरी क्षेत्रमा अभ्यास छ जौ, अन्तर्गत मल सिधै थप्दा। अन्य क्षेत्रहरु मा, मल को प्रभाव लाभ उठाउन प्रयोग गर्न सक्ने क्षमता - दोस्रो संस्कृति seeded।
फस्फोरस र पोटासियम रूपमा वसन्त जौ लागि यस्तो मल, Zyablov पाराले जोतेर अन्तर्गत बनेको छ। नाइट्रोजन खेती presowing अन्तर्गत खुवाउने गर्दा गर्न राम्रो छ। पोटासियम र फस्फोरस मदिरा संस्कृति गुणस्तर सुधार गर्न। सबै भन्दा राम्रो परिणाम, विशेष गरी खेती को पश्चिमी क्षेत्रमा, जौ पैदावार गर्दा पूर्ण मल खुवाउने।
एक मल घटक को अनुपात जो विकास क्रप मा माटो को प्रकार मा निर्भर हुन सक्छ। , साथै क्षेत्रमा podzolic खैरो र कालो पदावनत soils मा ओखर soils को अत्यधिक फस्फोरस र नाइट्रोजन मल गर्न उत्तरदायी जौ। भोकमरी सिमसार soils मा सबैभन्दा ठूलो परिणाम पोटासियम दिन्छ। सामान्य chernozems मा सबैभन्दा ठूलो प्रभाव फस्फोरस-पोटासियम जटिल प्रयोग गरेर हासिल गर्न सकिन्छ।
यसको फारम माटो, अनुमान उत्पादकत्व र पोषक को उपयोग को विशेषताहरु निर्भर रूपमा साथै मल खुराक। संस्कृति सामान्य वृद्धि, ती सूचीबद्ध मल भन्दा अन्य लागि, तपाईं बोरोनकोअर्थ, मैंगनीज, जस्ता, तामा, मोलिब्डेनम आधारित र यति मा जुन micronutrients, एक नम्बर प्रयोग गर्नुपर्छ। माटो मा micronutrients कमी बोट रोगहरु, चयापचय विकार र एकदम कम उपज गर्न सक्छ।
भोकमरी पीट soils मा मल रूपमा bluestone र pyrite cinder बनेको छ। यो टिप्पण तामा मल को प्रभाव बाली असर मात्र केही वर्ष लायक छ।
संस्कृति तिनीबारे राम्रो गहिरो शरद ऋतु पाराले जोतेर संग क्षेत्रहरू मा बढ्छ। गहिराई पाराले जोतेर 30 सेमी पुग्न सक्छ। वतन podsolic soils विशेष प्रभाव हासिल गर्न सकिन्छ जब मल र मल को साथ आवेदन एक recess कृषि योग्य पत्र। वसन्त गहुँ अन्तर्गत क्षेत्रमा जस्तै तरिका वसन्त जौ, ढिलाइ छरिरहेका लागि अभिप्रेरित गर्ने क्षेत्रमा हिउँ र पग्लियो पानी। वसन्त माटो उपचार साथ harrowing एक harrowing वा लुप र खेती समावेश हुन सक्छ।
अब चरणमा वसन्त जौ को खेती विचार गर्नुहोस्।
बीउ को तयारी
रोपेको लागि ठूलो जौ बीउ प्रयोग गर्नुहोस्। तिनीहरूले उच्च अंकुरण ऊर्जा, अंकुरण छ र हिप राम्रो बढ्न दिनुहोस्। हावा-ताप गर्मी द्वारा उपचार पैदावार बीउ वृद्धि गर्न। साथै, तिनीहरूले प्रमुख रोगहरु र किरा सुक्खा वा अर्ध-सुक्खा विधि देखि etched छन्।
वसन्त जौ प्रारम्भिक रोपण मिति संग बाली लागू हुन्छ। यदि सप्ताह को रोपेको मा ढिलाइ क्षेत्र निर्भर 10-40% द्वारा उपज कम हुन सक्छ। प्रारम्भिक रोपेको संग जौ चलचित्रहरू र प्रतिरोधी बिरुवा को एक न्यूनतम सामग्री संग भद्दा अनाज पैदावार।
नियम, वसन्त जौ वसन्त गहुँ संग छरिएको, वा यसलाई पछि। साइबेरिया र उत्तरी काजाकिस्तान जौ रोपेको पात्रोमा वर्ष आधारमा, मे 15-25 बाट सुरु हुन्छ। क्रिमीआ मा, KUBAN क्षेत्र र मध्य एशिया मा फरवरी बाली अभ्यास। यसरी, वसन्त जौ छरिरहेका को समय धेरै फरक र क्षेत्रको विशेष निर्भर गर्न सक्नुहुन्छ।
रोपेको वसन्त जौ पार र बन्द अभ्यास सबैभन्दा प्रभावकारी छन्। अभ्यास देखाउँछ रूपमा यी विधिहरू, एक पारंपरिक ड्रिल गति तुलनामा यो लगभग 15% थप उपज दिन्छ।
गति दर जौ को खेती को क्षेत्र मा निर्भर गर्दछ। उदाहरणका लागि, सुदूर पूर्व, तिनीहरूले 1.6 देखि प्रति हेक्टर2quintals (बारेमा 4.5 करोड कारगर बीउ) हो, र उत्तर काकेशस - प्रति हेक्टर 1.3-1.6 quintals (बारेमा 3.5-4,5लाख बीउ)। तसर्थ, आवेदन दर क्षेत्र को कृषिशास्रीय र माटो अवस्था आधारमा, एक एकदम व्यापक दायरा भित्र फरक हुन सक्छ। सिमी को thickened बाली प्रोटिन सामग्री घट्यो। संस्कृति मदिरा लागि उब्जाउ गरिन्छ भने यो खातामा लग्नु गर्नुपर्छ।
clayey भारी soils बीउ अधिक4भन्दा सेन्टीमिटरको गहिराइमा गर्न छरिएको र प्रकाश बलौटे मा - अपर्याप्त वर्षा ड्रिलिंग गहिराई को अवस्थामा छैन थप6भन्दा सेमी, 8 सेमी सम्म वृद्धि गर्न सकिँदैन छरिएको बीउ बिस्तारै सुनिनु र यसैले पृथ्वीको भिजेको तह मा प्लग गर्न आवश्यक छ .. ।
बाली को हेरविचार
बिरुवा मित्र थिए लागि, सुखा क्षेत्रमा बाहिर सङ्कुचनगर्दैछ posleposevnoe प्रकाश harrowing संग साथ लगे छ। आर्द्र क्षेत्रमा मार मा harrowing प्रयोग गर्नुहोस्। यी उपाय सम्भव, सामा नष्ट गर्न माटो खुकुलो पार्नु र जरा गर्न अक्सिजन को पहुँच वृद्धि बनाउन। को पाप्रो जमीन मा एक भारी वर्षा पछि गठन गरिएको छ भने, र मार अझै देखा छैन, यो harrows नष्ट।
जौ सँगै ripens। पकने कान को शुरू संग भंगुर हुन्छ र सजिलै अन्न crumbles। एक त्वरित मोडमा, पूर्ण पाकेको मा - दुई-चरण सफाई मोम पाकेको र एकल चरण को बीचमा देखि लगभग सुरु गर्नुहोस्।
Malting जौ: विशेषताहरु
मदिरा प्रयोग वसन्त जौ को विशेषताहरु, विशेष माग बनाउन। सबै भन्दा राम्रो उपयुक्त डबल-पङ्क्ति जौ प्रजातिहरू, ठूलो चिल्लो र समान रूप sprouting अन्न उत्पादन गर्ने हुँदैछ। मदिरा लागि अन्न कम्तिमा 78% स्टार्च एक ठूलो (बारेमा 0,040-0,050 G वजन) र tonkoplenchatym हुनुपर्छ, एक पराल-पहेंलो रंग, र एक उच्च अंकुरण ऊर्जा (% कुनै कम 95 भन्दा) छ।
पहिले यो केवल राम्रो जौको को अन्न तानाबाना बिकसित हुँदैछ लागि, प्रोटिन सामग्री जो न्यूनतम छ कि लाग्यो थियो। तर, यो पछि सबै प्रोटीन र आफ्नो गुणस्तर को संख्या मा छैन निर्भर फेला परेन। अध्ययन अनुसार, जौ उच्च आणविक वजन प्रोटीन (globulins र prolamins) व्यावहारिक पानी मा अघुलनशील छन् कि भइरहेको प्रयोग गर्दा सबै भन्दा राम्रो परिणाम हासिल गर्दै हुनुहुन्छ। बियर गैर-प्रोटिन नाइट्रोजन र नाइट्रोजन, albumin को उत्पादन को लागि खराब। यस्तो जौ लागि सबैभन्दा मूल्यवान precursors जाडो अन्न बाली, मकै, आलु, बीट, र सन छ।
जब सबै भन्दा राम्रो परिणाम तानाबाना बिकसित हुँदैछ लागि जौ को खेती बाली को प्रारम्भिक चरणमा मा हासिल गर्न सकिन्छ। यो पङ्क्तिबद्ध उच्च पैदावार प्राप्त गर्न अनुमति दिन्छ, भद्दा अनाज स्टार्च र कम Hulled उच्च हो।
सबैभन्दा उत्पादक अन्न रोपेको विधिहरू को खेती पनि बन्द अभ्यास र क्रसओभर छ। Posleposevnoe सङ्कुचनगर्दैछ क्रप गुणस्तर सकारात्मक प्रभाव छ। र crusts वा बलियो छाप को गठन माटो harrowing प्रयोग गरिन्छ। पङ्क्तिबद्ध - यी प्रविधी धन्यवाद एक वर्दी र अन्न steblestoy। जौ मदिरा को बाली मा यस्तो मामला मा, अन्न सानो र कम प्रदर्शन हुन सक्छ देखि, समायोजन गर्न Resort छैन मनमोहक छ।
बाटो प्रभावित एक ठूलो हदसम्म malting जौ गुणस्तर र कटाई समय। सबैभन्दा प्रभावकारी सफाई अन्न चिस्यान सामग्री 22% अधिक छैनन् जब पूर्ण पाकेको समयमा उत्पादन एकल-चरण, देखाउँछ। तथापि, दक्षिणी क्षेत्रहरु मा अक्सर दुई-चरण सफाई प्रयोग गर्नुहोस्। stagnate जौ भने, अन्न मा स्टार्च को राशि वृद्धि साँस सुरु रूपमा पर्छ। कम तापमान र पूर्ण पाकेको समयमा अत्यधिक चिस्यान adversely पछि मिति कटाई बीउ गुणस्तर असर गर्न सक्छ। के यो एक उज्ज्वल रंग राख्न र एक उच्च ताकत प्रदान गर्न अनुमति दिने, अन्नको ध्यान क्रमबद्ध बाहिर र सुकेको threshing पछि।
को जाडो लागि माटो तैयारी, रोपण प्रविधि र आश्रय: गिरावट मा स्ट्रबेरी कसरी रोपेर गर्न
Percheron घोडा नस्ल: फोटो, मूल्य र नस्ल विवरण
रग्बी फुटबल फरक छ? मतभेद निर्धारण
एनजाइना, तापमान, otitis संग संकुचन
संसारको शहर को सुन्दर दृश्यहरू
Dmitriy Lesnoy - जुवा खेल्ने मा एक विशेषज्ञ
सर्जरी बिना विद्रधि उपचार: परम्परागत व्यञ्जनहरु, डाक्टर 'सिफारिसहरू